အင်တာနက် ဒေါင်းလုဒ် မန်နေဂျာ မတင်ပေးဖြစ်တာကြာပါပြီ .. အခုဟာကတော့ 6.19 ပါ .. ခုလောလောဆယ်မှာတော့ နောက်ဆုံး version လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ .... သူ့ အထဲမှာပါတဲ့ Crack ကလည်း လုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ် ..... အဲ့ဒီ့ကောင်လေးကို Run ပြီးတော့ Activate ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ... IDM နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ပြဿနာ တက်နေသူများ အတွက် သိပ် အဆင်ပြေပါတယ် .... :) လိုချင်သူများတော့ အောက်ကနေ ဒေါင်းပေးဗျ နော် ..... :D
အားလုံး အစစအရာရာ အရင်ထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်....
Posted on Monday, February 10, 2014 by Unknown
Solving Systems Problems with or without Experiences - ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း စနစ်များ
၂၀၁၀ လောက်တုန်းက ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ရင်း ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ MMShare ကနေပြီးတော့ ကူးထားတာပါ .... ကူးသာကူး ထားလိုက်မိတာ .... ဒါပေမယ့် ဘယ်သူရေးထားတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် မမှတ်မိလိုက်မိပါဘူး ... အကယ်၍များ ပိုစ့်ရေးခဲ့သူ တွေ့ခဲ့ရင်တော့ ဒီနေရာကနေပဲ တောင်းပန်ရင်းနဲ့ Credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ .... ပိုစ့်မှာ ပါတဲ့ အကြောင်းကတော့ ကွန်ပျူတာ နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း ကို ဦးစားပေး ရေးထားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တကယ့် လက်တွေ့ဘ၀မှာလည်း ပြဿနာတွေ ကြုံလာတဲ့ အခါ မှာ ဖြေရှင်းတဲ့အခါ သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း အသုံး ၀င်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .... ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် .....
ပြဿနာတစ်ခုကို ပြေလည်စေရန် ဖြေရှင်းရခြင်းသည် နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံတို့ကို တစ်ဝက်စီ ပေါင်းစပ်အသုံးပြု ဖြေရှင်းရသော လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်စေ ယခုမှ စတင်၍ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သူဖြစ်စေ ပြဿနာတစ်ခုကို စနစ်တကျ ချဉ်းကပ် ဖြေရှင်းတတ်ရန် အထူး အရေးကြီးပါသည်။
ကွန်ပျုတာတစ်လုံး၊ ကွန်ရက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအတွက် ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ရှင်းရသည့်အချိန်တိုင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေခံနည်းလမ်း နှစ်ခုရှိသည်။ အကောင်းမြင်အခြေပြု ဖြေရှင်းနည်း (Optimistic way ) နှင့် အဆိုးမြင်အခြေပြု ဖြေရှင်းနည်း (Pessimistic way) တို့ ဖြစ်သည်။ သူ့နည်းနှင့်သူ ကောင်းသောအချက်များ ရှိသည်။
အကယ်၍ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို စနစ်တကျဖြေရှင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာ ရှိနေသည်ဆိုလျှင် ၄င်းနည်းလမ်းကို သိထားသူတိုင်း - အသုံးချမည်သာ ဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် အဆိုးမြင်အခြေပြု ဖြေရှင်းနည်း (မည်သည့်နေရာတွင် မှားယွင်းနေသည်ကို ဦးစွာရှာဖွေအဖြေရှာနည်း) က အဖြေတစ်ရပ်ကို လျှင်မြန်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်တတ်သည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ဤနည်းစနစ်က ပိုကောင်းသည် ထင်ရသည်။
Optimistic and Pessimistic Approach သို့သော် မည်သည့်နေရာတွင် မှားနေသည်ကို ချက်ချင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန်မှာ - ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် ထိုအမှားမျိုးကို မိမိကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံကို လေ့လာရာမှ သော်လည်းကောင်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးသည့် ကနဦး အတွေ့အကြုံတစ်ခု ရှိထားခဲ့ဖူးမှသာ မှားနေသည့်အချက်ကို လျင်မြန်စွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ တစ်ကယ်တမ်း ယခုမှ လုပ်ငန်းခွင်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ကာစ လူငယ်၊ လူသစ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော အတွေ့အကြုံကို အခြေခံသည့် ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကို အသုံးပြုရန်မှာ စိတ်ကူးထဲပင် မစဉ်းစားနိုင်သည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ အဆိုးမြင်အခြေပြု ဖြေရှင်းနည်း (Pessimistic way) မှာ ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်။
Provlem Solving Examples
ဥပမာ - Power Supply မှ ညှော်နံ့ရခြင်း မျိုး။
အတွေ့အကြုံရှိထားသူ တစ်ဦးအတွက် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အဖြေဖြစ်သည်။ သို့သော် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရသည့်အခါတွင် အထက်ပါ ဥပမာကဲ့သို့ လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
အကောင်းမြင်အခြေပြုဖြေရှင်းနည်းကို ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ ပြဿနာ နှစ်မျိုးလုံးကို ဖြေရှင်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွင်း မည်သည့်အရာက မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နေသည်ကို ရှာဖွေရခြင်းသည် ပထမဦးဆုံးအချိန်တွင် အလွန် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည် ထင်ရသော်လည်း၊ အလေ့အကျင့်ရလာသည့်အခါ အလွန် အခြေခံကျသောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ အကောင်းမြင်အခြေပြုဖြေရှင်းနည်းကို နမူနာပြနိုင်ရန်အတွက် အဖြစ်များသည့် ကွန်ရက်အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြင့် လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ကျွန်တော်တို့ ကိုင်တွယ်နေသည့် ကွန်ရက်ရှိ မောင်နီ၏ ကွန်ပျူတာသည် ကုမ္ပ္ပဏီ၏ Intranet Server နှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားသည်။ ဤပြဿနာအတွက် အောက်ပါအတိုင်း အကောင်းမြင်အခြေပြု ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် အဖြေရှာကြည့်နိုင်သည်။
1. ကျွန်တော်တို့၏ ကွန်ပျူတာမှတဆင့် ကုမ္ပ္ပဏီ၏ Intranet Server သို့ Host Name ကို အသုံးပြုပြီး Ping လုပ်ကြည့်မည်။ Server မှ Reply ပြန်လာပါက Name Resolution ရနေသည့် အတွက် DNS အလုပ်လုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ Ping ရသည့် အတွက်ကျွန်တော်တို့၏ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆာဗာကြားရှိ Network ဆက်သွယ်မှုမှာ ကောင်းမွန်နေပြီ ဖြစ်သည်။
2. အဆင့် ၁ အရ ဆာဗာဆီသို့ ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်နေသည်ကို တွေ့ရသည့်အတွက်၊ မောင်နီ၏ ကွန်ပျူတာတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကွန်ရက် ပြဿနာကို သွားရောက်စစ်ဆေးသည်။ ကွန်ရက်ကြိုးပြုတ်နေသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့်အတွက် ၊ ပြန်တပ်ပေးလိုက်သည့်နောက် ပြဿနာဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်သည်။
Steps by Steps Approach to Solve the Problems
တကယ်တမ်းလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရသည့် အခြေအနေများမှာ ယခုထက်ပိုမို ခက်ခဲနိုင်သော်လည်း ဖြေရှင်းရာတွင် အသုံးပြုရမည့် နည်းလမ်းများကို စနစ်တကျ သိရှိထားပါက မည်မျှခက်ခဲသည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်စေ ကျော်လွှားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် (၈) ဆင့် ပါရှိသည်။
1. ဖြစ်နေသည့် ပြဿနာကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။ (Identifying the problem)
2. ပြဿနာ၏ သမိုင်းကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ (Documenting the history of the problem)
3. လက်ရှိ အခြေအနေကို စိစစ်လေ့လာခြင်း။ (Analyzing the current environment)
4. လတ်တလော ပြဿနာရှိနေသည့် ဖြစ်စဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ (Documenting processes involved in the problem)
5. မှန်ကန်နေသည့် အရာများကို ရွေးချယ် ဖယ်ထုတ်ခြင်း။ (Eliminating what's right)
6. ပြဿနာကို ပြင်ဆင်ခြင်း။ (Correcting the problem)
7. ပြင်ဆင်ချက်မှန်မမှန်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း။ (Testing the corrective action)
8. နောက်ထပ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများကို ပြုလုပ်ခြင်း။ (Following up)
Credit to => mmshare.org
Posted on Thursday, January 16, 2014 by Unknown
Phone ရဲ့ Battery ကြာကြာသုံးနိုင်ဖို့
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဖုန်းကဒ်တွေလည်း ဈေးက နည်းနည်းချင်းစီကျလာပြီဆိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဖုန်းကဒ် ဈေးထက် ဟန်းဆက် ဈေးက ပိုပြီးတော့ မြင့်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါပြီ ... နောက်ကျရင် ဖုန်းကဒ်ပျက်သွားရင် အသစ်ဝယ်ပြီးသုံးလိုက်ဖို့ မခက်ပေမယ့် ဈေးကြီးကြီး ဟန်းဆက်ကိုင်ထားသူများ အတွက်ကတော့ ပျက်သွားရင် လွှင့်ပစ်လို့လည်းမရ.. ဆက်သုံးတော့လည်း ဘက်ထရီ က အထားမခံတော့ ယူသွားရလောက်အောင် အဆင်မပြေပြန်ဘူး.. ဘက်ထရီ ကလည်းကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမယ့် မသုံးသင့်တာ တွေ ပိတ်မထားပဲ နေမိတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဘက်ထရီက မခံပြန်ဘူး ... ဘက်ထရီ အားကို သတိထားချွေတာသုံးရမယ့်နေရာမှာ အဲ့ဒီ့လိုမျိုး ပြဿနာလေးတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ် ... ပုံတွေမှာတော့ Andriod နဲ့ပြထားပေမယ့် Phone Battery တော်တော်များများက lithium-ion battery နဲ့ပဲ လုပ်ထားတာမို့ iDevice များအတွက်လည်း အခြေခံအားဖြင့် တူပါတယ် ..
၁။ Brighitness ကိုလျှော့ချထားပါ ..
ဖုန်းမှာ ထားတဲ့ အလင်းရောင်ဟာ လိုတာထက်ပိုနေခဲ့ရင် ဘက်ထရီကိုပိုပြီးတော့ ကုန်စေပါတယ် ... ဒါလုပ်တာကလည်း အလွယ်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးသော လျော့ချခြင်းပါပဲ ... သွားရမယ့်လမ်းကတော့ ..
Settings Icon –> Display settings and Brightness Level.
အဲ့ဒီကို ရောက်ပြီဆိုရင် ကိုယ်လိုသလောက်ပဲ ညှိပြီးတော့ ထားလိုက်ပါ ...
၂။ Vibrate Feature ကို ဖြစ်နိုင်ရင် ပိတ်ထားပါ ..
Vibrate လုပ်ထားတာကလည်း Phone ရဲ့ Battery ကို စားပါတယ် ... Vibrate မှာ Feature ၄ ခုပါပါတယ် ...
လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှ သာသုံးပါ ...
၃။ သုံးပြီးသော App များကို ပိတ်လိုက်ပါ ..
ဂိမ်းတွေဘာတွေ ကစားဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကစားပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့က ရိုးရိုးပဲပိတ်လိုက်တာပါ... အဲလိုပိတ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ တချို့တချို့ ဂိမ်းတွေဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ် .. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ကစားပြီးသွားပြီဆိုရင် Task Killer ဖြစ်ဖြစ် Run ထားပြီးတော့ ပိတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ ... ပြီးရင် Clear Memory ဆိုပြီးတော့ Run ကိုရှင်းပေးပါ ...
မှတ်ချက်။ ။ Save ပြီး လုပ်ရတဲ့ App တွေ ၊ ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတွေဆိုရင်တော့ သေချာသိမ်းပါခင်ဗျာ ...
၄။ GPS , Wifi နဲ့ Bluetooth တွေကို မလိုအပ်ပါက ပိတ်ထားပါ ..
Wifi ကို ဖုန်းကတ်ကနေပြီးတော့ အင်တာနက် တိုက်ရိုက်သုံးရင် မလိုအပ်ပေမယ့် တခါတလေ Wifi မိတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဆို ရင် ဖွင့်ပြီးသုံးကြပါတယ် .. ပြီးတော့ ကျတော့ အဲ့ဒါကို မပိတ်မိကြဘူး ... မပိတ်မိကြတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘက်ထရီ စားတာပိုမြန်လာပါတယ် ... Bluetooth ကလည်း အဲ့လိုပါပဲ ... အသုံးပြုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ပိတ်ထားသင့်ပါတယ် .. အဲ့ဒါတွေ ဖွင့်ထားရင် ဘာကြောင့် ကုန်တာမြန်လဲ ဆိုရင်တော့ သူတို့က ဖွင့်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်က မသုံးပဲလဲ အမြဲတမ်း Search လုပ်နေပါတယ် .. အဲ့ဒီ့တော့ သူ့အတွက်ကိုလည်း အား ပေးရတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ ...
၅။ ဖြစ်နိုင်ရင် 2G ကိုသာသုံးပါ ..
နောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်လာတာတွေက 3G , 3.5G နဲ့ 4G စသဖြင့် ရှိလာပါတယ် ... သူက မြင့်လာတာနဲ့ အမျှ ဘက်ထရီ အသုံးပြုမှု ကလည်းများလာပါတယ် .. ဒါကြောင့် လိုအပ်မှသာ စောစောက ပြောတဲ့ G တွေကို သုံးပါခင်ဗျာ ... ဖုန်းအတွက်သာ အသုံးပြုမယ့် အချိန် ၊ အင်တာနက်မသုံးဖြစ်တဲ့ အချိန် မျိုးပေါ့ ... 2G ပြောင်းပုံကတော့ ပုံမှာ ပြထားသလို သုံးလို့ရသလို ၊ App တွေလည်း ရှိပါတယ် ... ဥပမာ 2G-3G OnOff ဆိုတဲ့ app လိုမျိုးပါ ....
၆။ Animated Wallpaper တွေကို မသုံးပါနဲ့ ...
အဲ့ဒီ့ wallpaper တွေက နောက်က effect တွေ လှုပ်ရှားဖို့ အတွက်လည်း ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီ ကို နည်းနည်းပေးရပါတယ် .. ဒါကြောင့် သိပ်ပြီးတော့ လှဖို့ မလိုဘူးဆိုရင် ၊ ဖုန်းအားအလွယ်တကူ သွင်းလို့ ရမယ့် နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ မသုံးသင့်ပါဘူး :) ....
၇။ ပူတဲ့နေရာတွေကို အထူးသဖြင့်ရှောင်ပါ ..
lithium-ion ဘက်ထရီတွေအတွက် အပူချိန်ပြင်းပြင်းရှိတဲ့နေရာတွေက ဘက်ထရီရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားကို ကျစေပါတယ် ... အခန်းရဲ့ အပူချိန် ၃၂ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ရှိတဲ့ နေရာမျိုးမှာဆိုရင် ၁ နှစ်ကို ဘက်ထရီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နှုန်း ၆ ရာခိုင်နှုန်းကျစေပါတယ် .... ၇၇ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်မှာဆိုရင် ဘက်ထီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နှုန်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိတောင်မှ ကျနိုင်ပါတယ် ... ဒါကြောင့် အပူချိန် များတဲ့နေရာကို ရှောင်ပါ ...
၈။ ဘက်ထရီကို အားကုန်တဲ့အထိ မသုံးပါနဲ့ ...
ဖုန်းတွေမှာ ဘက်ထရီ ကုန်တော့မယ်ဆိုရင် ပုံမှာ ပြတဲ့ Alert ကလေးပေါ်လာပါတယ် .... ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့ဒီ့ လို Alert ပေါ်လာအောင်သုံးတာ တစ်လ ကို တစ်ခါသာလျှင်သုံးသင့်ပါတယ် ...တစ်လကို တစ်ခါထက်ပိုပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘက်ထရီ Drain ဖြစ်တာ ပိုမြန်ပါတယ် .. ဘက်ထရီကို အားဖြည့်နည်း ၂ မျိုးရှိပါတယ် ... တစ်ခုက Full circle charge နဲ့ Normal circle charge ဖြစ်ပါတယ် .. Full circle charge ဆိုတာကတော့ ဘက်ထရီ မှာ အဲ့ဒီ့လိုမျိုး Alert ကလေးပေါ်လာပြီး ဆက်သုံးလိုက်ပါ .. ဥပမာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပဲ ကျန်အောင် သုံးလိုက်တာပါ ... အဲ့ဒီ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ အားပြည့်တဲ့ အထိ ဖြည့်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါ Full circle charge ပါ .. အဲ့ဒီ့ Full circle charge ကို ၁ လကို အများဆုံး ၁ ကြိမ်သာလျှင်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ် ... Normal circle charge ဆိုတာကတော့ အဲ့လိုမျိုး Alert မပေးခင်မှာ အားဖြည့်ပေးတာပါ ... အဲ့ဒါကတော့ ပုံမှန်လုပ်လည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး .... ၀ ရာခိုင်နှုန်းထိကျန်အောင်တော့ မသုံးမိဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ် .... ပြီးတော့ ဘက်ထရီ ကို အား ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်း ထပ်ပြီး တော့ မကြာပါစေနဲ့ တခါတည်းဖြုတ်လိုက်ပါ ....
၉။ Screen Timeout ကို အကြာကြီး မထားပါနဲ့ ...
ဒါကတော့ ဖုန်းကို ကိုယ် မသုံးတာနဲ့ တခါတည်း lock လုပ်တာပါ ... Screen ကို ပိတ်လိုက်တာပါ .... တကယ်လို့ lock မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ Screen Timeout ကို ခပ်နည်းနည်းသာပေးထားလိုက်ပါ ... ( နားလည်မယ်လို့ ယူဆပါတယ် :D )
၁၀။ ဖုန်းလိုင်း သိပ် မမိတဲ့ နေရာတွေ ကိုရှောင်ပါ ...
ဒါကတော့ရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် .. ဖုန်းလိုင်း သိပ်မမိတဲ့နေရာမှာ စကားပြောမယ်ဆိုရင် ဧရိယာတိုင် ကို ပြည့်ဖို့အတွက် ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက် ဖုန်းက သူ့အလိုလို ဖုန်းလိုင်းကို ရှာရပါတယ် .. အဲ့တော့ မလိုအပ်ပဲ အားကုန် သွားတတ်ပါတယ် ...
အခု ကျွန်တော်ရေးပေးခဲ့တာတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်း ဘက်ထရီကို သက်တမ်းကြာရှည်ခံဖို့ ၊ ရေရှည် သုံးနိုင်ဖို့အတွက် အကြံပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. ပြီးတော့ အဲ့ဒီ့ အချက်ကလေးတွေကို ကိုယ့်အနေနဲ့လည်း မှတ်ထားရလွယ်မယ်ထင်ပါတယ် ... အကယ်၍ များ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို နားမလည်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အားနည်းချက်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ .....
အားလုံး အစစအရာရာ အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ .....
Posted on Friday, January 10, 2014 by Unknown
ကွန်ပျူတာ စာအုပ်တချို့ (Excel , IndesignCs3, Powerpoint, ICS network )
တနေ့က စာအုပ်တွေ လိုက်ရှာရင်း မြ၀တီ ဆိုဒ်ကနေပြီးတော့ ရလာတဲ့ ကွန်ပျူတာပိုင်း ဆိုင်ရာစာအုပ်ကလေးတွေကို ပြန်ပြီးတော့ မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ် .... စာအုပ်ကတော့ လေးအုပ်ပါ ...
MS office ထဲက အသုံးများတဲ့ Excel နဲ့ Powerpoint အကြောင်း စာအုပ်တွေ နဲ့ Adobe Indesign CS3, ICS network အကြောင်း စာအုပ်တွေပါ .... ရေးတာကတော့ ကကကွန် ကနေပြီးတော့ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ... Excel နဲ့ Powerpoint အကြောင်းကို တော့ 2007 ကို အခြေခံပြီးတော့ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် 2007 ကို ပိုင်ရင် နောက်ပိုင်း ထွက်တဲ့ 2010 နဲ့ 2013 အတွက်ကို လိုက်ပြီးတော့ လေ့လာဖို့က သိပ်ပြီး မခက်တော့ ပါဘူး .... လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါခင်ဗျာ ... တစ်အုပ်ချင်းစီ ပဲ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် .... မူရင်း တင်ပေးထားတဲ့ မြ၀တီ ဆိုဒ် ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
ICS-Network And Windows XP.pdf
တကယ်လို့များ အချိန် ၅ စက္ကန့်လောက်ပိုရရင် အောက်က နေပြီးတော့ ဒေါင်းလုဒ် ချပေးပါခင်ဗျာ .. :D
Indesign CS3 (with advertisement)
ICS network and window XP (with advertisement)
MS PowerPoint 2007 (with advertisement)
MS Excel 2007 (with advertisement)
ဒီအောက်ကနေရာလေးမှာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ DropBox မှာ စာအုပ်တွေ Share လုပ်ထားတဲ့ folder လေးဖြစ်ပါတယ် ... ၀င်ကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျာ .... လိုအပ်တာတွေရှိရင်လည်း ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ ... စာအုပ်ကတော့ သိပ်ပြီးတော့ မစုံပါဘူး ... ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိနေတာကို ပြန်မျှဝေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
To My Ebook Folder
Microsoft Office 2010 & 2013 ToolKit
စီပုံး ကနေပြီးတော့ တစ်ယောက်က ပြောသွားလို့ပါ .... အရင်က နှစ်ခု လုံးကို တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် .... ခု အဲ့ဒီ့ မှာ လင့်ခ် က သေတာတွေ က သေနေလို့ နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းပြီးတော့ တခါတည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..... နှစ်ခု ကို ပေါင်းပြီးတော့ ဒေါင်းရင် Mb ဆိုဒ် များသွားမှာ စိုးလို့ ၁ ခုချင်းစီ ခွဲပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ... ပြီး ကိုယ်လိုတာလေးကို ပဲ ဒေါင်းလို့ရအောင်လို့ပါ .... ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ .... Dropbox ကနေပြီးတော့ပဲ တင်ပေးထားပါတယ် .....
၅ စက္ကန့်လောက် အချိန်ရတယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က လင့်ခ်ကနေပြီးတော့ ဒေါင်းပေးပါခင်ဗျာ ... :)
MS Office 2013 Toolkit ( With Advertisement )
MS Office 2010 Toolkit ( With Advertisement )
Posted on Saturday, January 04, 2014 by Unknown
Nero 2014 Platinum ( with serial no: )
ကျွန်တော်တို့တွေ CD ထဲကို Data တွေထည့်တဲ့ အခါ ၊ Video ခွေ တွေ လုပ်တဲ့ အခါမှာ အသုံးများတဲ့ Nero ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .... အခု Ver ကတော့ Nero 2014 ပါ ... ကျွန်တော် သုံးကြည့်တာလည်း အဆင်ပြေပါတယ် ... Crack နဲ့မဟုတ်ပဲ Serial number နဲ့ ဆိုတော့ သိပ်ပြီးတော့ အခက်အခဲလည်း မရှိပါဘူး ... တကယ်လို့ Serial No: နဲ့ မကိုက်ဘူး ဆိုရင်တော့ ပြောကြပါ .. ကျွန်တော် crack ရှာပြီးတော့ တင်ပေးပါမယ် .... ကျွန်တော်သုံးတာတော့ အဆင်ပြေလို့ serial no နဲ့ ဟာလေးကို ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..... သူ့ရဲ့ အတွင်းပိုင်း GUI မှာတော့ သိပ်ပြီး ထွေထွေထူးထူး ပြောင်းလဲ သွားခြင်းမရှိတဲ့ အတွက် သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ... ဆိုဒ်ကတော့ 270 MB ရှိပါတယ် ... နည်းနည်းတော့ ကြီးပါတယ် .... ခွဲပြီးတော့ မတင်ပေးပဲနဲ့ တခု တည်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ .... လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က လင့်ခ် မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
တကယ်လို့ ၅ စက္ကန့်လောက်များ အချိန်ပိုရရင်တော့ အောက်ကလင့်ခ် ကနေဒေါင်းပေးနော် ...ဘာမှ ထူးခြားချက်တော့မပါပါဘူး ... ကြေငြာစောင့်ဖို့အတွက်ပါ ... :D :D
Download ( with ads)
ဒါကတော့ Software ကို ဒေါင်းပြီးတော့ serial no မရှိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ..... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Serial no :::: 9040-0198-Z5EU-U5M9-5422-WC24-0EEW-L46M :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Posted on Thursday, January 02, 2014 by Unknown
Programming Language များကို အွန်လိုင်းမှာလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် ( ၂၂) ဆိုဒ်
" မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ " ယနေ့နှစ်သစ်အခါသမယ မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ Blog သို့ ရောက်ရှိလာသော ဧည့်သည်တော်များအားလုံးအတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
Coding ၀ါသနာပါသူများအနေနဲ့ Coding နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ လေ့လာလို့ ရနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေ ကို စုစည်းပြီး ပေးထားလိုက်ပါတယ် ..... tutorial တွေကို အဲ့ဒီ့ ဆိုဒ်တွေမှာ သွားပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ် ... ဘယ် Program တွေကို ဘယ်လို ရေးလဲ ... Game တွေကို ဘယ်လို ရေး သလဲ စသဖြင့်ပေါ့ .... Video tut တွေ ပါသလို lecture တွေ လည်းပါပါတယ် ..... ကိုယ်နဲ့ ဘယ် Site ကဖြင့် သင့်တော်မလဲ ဆိုတာ ရွေးပြီးတော့ သာ ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ .... Coding နဲ့ ပါတ်သတ်သူများအနေနဲ့ စုစည်းထားသင့်တဲ့ ဆိုဒ်တွေပါခင်ဗျာ .....
(၂) Google Code University
Peer to Peer University မှာတော့ Web-based programming တွေကို လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် .... သူ့မှာတော့ အကောင့် ဖောက်ဖို့လိုပါတယ် .... အကောင့် ဖောက်ပြီး သူရဲ့ အထဲမှာ ပါတဲ့ Course တစ်ခုခု ကို ပြီးပြီ ဆိုရင် သူ့ဆိုဒ်က Badge လေးတစ်ခု ရပါတယ် ... ကိုယ့်ရဲ့ Profile မှာ website မှာ အဲ့ဒီ့ Badge လေးကို သုံးလို့ရပါတယ် ... သင်ယူတတ်မြောက်ပြီးကြောင်းပေါ့ ....
(၄) HTML5 Rocks
ဒီဆိုဒ်မှာလည်း ကိုယ်မေးချင်တာတွေ မေးဖို့အတွက်ကို အကောင့် ဖောက်ရပါတယ် .... Tutorial တွေကို လည်း လေ့လာလို့ရပါတယ် .... သင်လို့ရတာတွေကတော့ web application frameworks, debugging tools, and compatibility resources စသဖြင့် သင်ယူလို့ရပါတယ် ...
(၆) The Code Player
ဒီဆိုဒ်ကတော့ Ruby နဲ့ပါတ်သတ်လို့ အကုန်လေ့လာလို့ရပါတယ် .... Framework တွေကို ဒေါင်းပြီးတော့လည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ် .... Ruby သီးသန့်ပဲဖြစ်ပါတယ် ...
(၈) Stack Overflow
ဒီဆိုဒ်ကတော့ Forum တစ်ခုလိုဖြစ်ပါတယ် .... အဲ့ဒီ့ ဆိုဒ်မှာ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် .... ကိုယ် အနေနဲ့ ရေးနေရင်း ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် သွားမေးလိုက်ပါ .... သူတို့တွေက ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းတွေကို ပြောပြပါလိမ့်မယ် .... လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူ တွေအတွက်တော့ တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါ ....
(၉) Apple Developer Center
ဒါကတော့ Apple က သူ့ရဲ့ Developer တွေအတွက် လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ...
(၁၀) Android Developer Center
အခု Moblie ဆိုပြီးပြောလိုက်တာနဲ့ Android ဆိုတာနဲ့ တွဲပြီးတော့ကို မြင်လာတဲ့ အချိန်မှာ Android app ရေးသူတွေ အတွက် တော့ အသုံးဝင်ဆုံး ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .....
ဒီနေရာလေးကတော့ Mobile ဖုန်းတွေ အတွက် App ရေးသားသူတွေ အတွက်ပါပဲ ....Tutorial တွေကိုလည်း စုံအောင် တင်ပေးထားပါတယ် .... Ios , Android နဲ့ window phone တွေအတွက်ပါ tut တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ......
ဒီဆိုဒ်ကတော့ Harvard တက္ကသိုလ် ၊ မန်ဆာချူးဆက် တက္ကသိုလ် နဲ့ Berekley တက္ကသိုလ် တို့ ပေါင်းပြီးတော့ Computer Scienceသင်ကြားပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ....
(၁၄) YouTube EDU
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ Youtube ပါ ... အဲ့ဒီ့မှာ ကတော့ Video training တွေ နဲ့တင်ပြထားပါတယ် ... ဘာတွေ လေ့လာလို့ရသလဲဆိုရင်တော့ အများကြီး ရှိပါတယ် .... ကိုယ် သင်ချင်တာလေးကို ရွေးပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်ခွဲအလိုက်သာ ကြည့်သွားကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ် .....
ဒီနေရာလေးမှာတော့ software platform တွေ tutorials တွေ example code တွေ ကို free ဒေါင်းလို့ရမှာပါ ... ပြီးရင် အခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါမှာ forum မှာသွားပြီးတော့ မေးလို့ရပါတယ် ....
(၁၇) Code Avengers
(၁၈) Code School
ဒီနေရာလေးမှာကတော့ Course တွေအားလုံးကို သူက free ပေးမထားပါဘူး ... ဒါပေမယ့် သူ့ဆီမှာ လေ့လာလို့ရတဲ့ Free ပေးထားတဲ့ Course တွေကတင် တော်တော် ကို အသုံးဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် .....
(၁၉) Hackety Hack
ဒီဆိုဒ်ကတော့ Hacking အတွက် သင်ကြားပေးတဲ့ ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ် ... သူကပြောထားတာတော့ Programming အတွေ့အကြုံ Zero level အဆင့် ကနေပြီးတော့ သင်ပေးတာပါ .... သူသုံးတာကတော့ Ruby ကို သုံးပြီးတော့ သင်ပေးပါတယ် ...
(၂၀) Learn Code The Hard Way
ဒီဆိုဒ်မှာကတော့ C ၊ Phython ၊ Ruby ၊ SQL နဲ့ Regex စတာတွေကို အဓိက သင်လို့ရပါမယ် ...
ဒီဆိုဒ်ကလေးကတော့ Game တွေရေးဖို့အတွက် အဓိက ထားပြီးတော့ သင်ကြားပေးပါတယ် .... 3D နဲ့ ပါတ်သတ်တာတွေ ၊ Thinking တွေ ၊ Problem solving တွေ နဲ့ စုံစုံလင်လင် ရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ ...
ဒီဆိုဒ်ကလေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကလေးတွေ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားပါတယ်တဲ့ ... ဒါပေမယ့် တကယ့် Basic ကနေပြီးတော့ သင်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ ... games တွေ music တွေ art တွေ stories တွေ animations တွေ စသဖြင့် သင်ယူနိုင်မှာပါ ...
အပေါ်ကတော့ Free အနေနဲ့ လေ့လာလို့ရမယ့် ဆိုဒ်တွေ ကို စုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် .... အခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာကို လေ့လာချင်လဲ ၊ လေ့လာမယ်ဆိုရင် Google မှာ ရှာတဲ့ အခါ တိတိကျကျ ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် ၊ ဘယ်လို ရှာရမလဲ ဆိုတာ သိဖို့အတွက် ၊ အချိန်မကုန်စေဖို့အတွက်ပါ ...
အခု ကျွန်တော်တို့က Programming Language တစ်ခုကို လေ့လာဖို့အတွက် ရှာမယ် ဆိုရင် ... Google မှာ
e.g : learn (phython) ဆိုပြီးတော့ ရှာကြည့်ပါ .. ကိုယ်ရှာဖွေတာနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ တကယ်အသုံးဝင်တာတွေကို ချပြပါလိမ့်မယ် ...
ဒီနည်းလေးကတော့ ကိုယ်သင်ချင်တာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ Courses တွေ နဲ့ သင်ထားတဲ့ Education ဆိုဒ်တွေကို ရှာဖွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ....
ဒီလိုလေး ရှာရင်တော့ ကိုယ်ရှာဖွေတဲ့ language နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ စာအုပ်တွေကို ရှာဖွေပေးမှာပါတယ် .... အဲ့ဒီ့ အနီလေးနဲ့ပြထားတဲ့ နေရာမှာ Language တခုခု ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က ဘယ်သူရေးတဲ့ စာအုပ်လိုချင်တာလဲ .. အဲ့ဒီ့နေရာမှာအစားထိုး ပြီးတော့ ရိုက်ပြီးတော့ ရှာကြည့်ပါ ... တိတိကျကျ ရှာဖွေပေးတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ......
ဆိုဒ်တွေရဲ့ အကြောင်းကို ရေးထားတာ သိပ်ပြီးတော့ စုံစုံလင်လင် မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်တကယ်လိုချင်လို့ ရှာတဲ့ အခါကျရင် ဘယ်ဆိုဒ်တွေ ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာသိရင် အဆင်ပြေစေဖို့ရယ် ၊ ပြီးတော့ Coding နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ သင်ကြားပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို စုပေးထားချင်တဲ့ အတွက်ရယ်ကြောင့်ပါ ... ...
Credit to => techspot.com
Posted on Wednesday, January 01, 2014 by Unknown
Auslogics File Recovery ( ပျောက်သွားသော file များ ပြန်ရှာရန် )
ဟို အရင်က ကျွန်တော် Undelete Plus ဆိုပြီးတော့ Recovery soft တစ်ခု ကို တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် .. ခု တစ်ခု ကလည်းအဲ့လိုပါပဲ ... ပျောက်သွားတဲ့ Photo တွေ စာအုပ်တွေ ရှာဖို့ အတွက်ပါ ... သုံးရတဲ့ GUI ကတော့ သာမာန် အသုံးပြုသူ တစ်ယောက် အတွက်တောင်မှ တော်တော် ရိုးရှင်းတဲ့ GUI ဖြစ်ပါတယ် .. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ သုံးရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ် ... ဒါကြောင့် လိုရမယ်ရ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်ပြီး သိမ်းထားစေချင်ပါတယ် ... ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ size ကလည်း အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး ... 5Mb ကျော်ကျော်လေးပါပဲ ... အခု ရှိတဲ့ file ထဲမှာတော့ crack ပါ ပါတယ် ..
Crack ထည့်နည်းကတော့ ...
ပထမဆုံး soft ကို run လိုက်ပါ .. ပြီးရင် မဖွင့်ပါနဲ့ဦး ပိတ်ထားလိုက်ပါ ...
ပြီးရင်တော့ အထဲက Crack folder ထဲက aushelper.dll ဆိုတာလေး ကို Copy လုပ်လိုက်ပါ ..
ပြီးရင်တော့ C => Program file (x86) => Auslogics => Auslogics File Recovery ထဲမှာ Paste လုပ် ပေးလိုက်ပါ ... ပြီးရင်တော့ အဆင်ပြေစွာ အသုံး ပြု နိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ ....
ဒေါင်းမယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် .....
Posted on Sunday, November 10, 2013 by Unknown
IDM update ထွက်လာလို့ Update ပေးမိသူများ ၊ အဆင်မပြေသူများအတွက်ပါခင်ဗျာ ..... ခုလောလောဆယ်တော့ နောက်ဆုံး Version ပါပဲ .... အခု ပေးတဲ့ဟာကတော့ သူ့အတွက် Crack လုပ်ရတာ အရင်ကလို သိပ်မရှုပ်တော့ဘူးဗျ ....ဟိုအထဲမှာ သွားထည့် ဒီအထဲမှာသွားထည့် ... ဟိုဖိုင်ရှာ ဒီဖိုင်ရှာ မလုပ်ရတော့ဘူး ..... အခုဟာက အထဲမှာပါတဲ့ Crack ဆိုတာလေးကို ဖွင့်ပြီးတော့ Activate ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် တခါတည်း cracked ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ..... ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် တော့ အောက်က လင့်ခ် မှာယူလိုက်ပါခင်ဗျာ ....
Posted on Monday, September 23, 2013 by Unknown
Pen drive/Memory Card ထဲက Shortcut Virus ရှင်းရန်
ကျွန်တော် ပျောက်သွားတာ လည်း အတော်ကြာ ... တခြား ကိစ္စလေး တစ်ခုကြောင့် အတော်ကြာပျောက်သွား တဲ့ အတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ် ... ကျွန်တော့် ဆီ ကို အမြဲရောက်နေသူတွေအတွက် လည်း ပိုစ့် အသစ်တွေ မတင်ပေးနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ထပ်တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ ... :) .... ကျွန်တော် အခုတလော ကြုံနေရတဲ့ virus လေး ရှင်း နည်းလေးပါ ... သူ က ဘာလုပ်လိုက်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ pen drive တွေ ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ ကို shortcut လုပ်ပြီးတော့ hide လုပ်ပစ်လိုက်တာ ပါ ... အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် ကိုယ်က ဖွင့်လို့လည်း မရ ... မြင်နေရတာကလည်း shortcut ... ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ drive ထဲမှာလည်း data က ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ နေရာ ယူထားတယ် ... Antivirus နဲ့ စစ်ပြန်တော့လည်း မတွေ့ရပြန် ... အတော် စိတ်ရှုပ်လာရတယ် ဗျ ... နောက်တော့ကျတော့ ပြန်ကူးမယ်ကွာ ဆိုပြီးတော့ format ရိုက်ပလိုက်တယ် ... ပြီးရော .... အဲ့တော့ ပြန်ထည့်ရတော့ ပင်ပန်းတာပေါ့ ... :D အဲ့လိုမျိုး မလုပ်ရအောင်ပါ ... အခု လုပ်မယ့်ဟာက Antivirus လည်းမလိုပါဘူး ... ကဲ ခု စပြီးတော့ လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ ....
ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Pen drive ကို ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ထားလိုက်ပါ ...
ပြီးရင်တော့ cmd ကို ခေါ်ရမှာပါ ... ( window key + r ) ဆို တွဲနှိပ်လိုက်ရင် Run box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ပြီးရင်တော့ cmd ဆို ရိုက်ပြီးတော့ enter ပေးလိုက်ပါ ... အဲ့ဒီ့မှာ Cmd ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ....
ပေါ်လာရင် အဲ့ဒီ့မယ် ကိုယ့် ရဲ့ drive letter ကို ရိုက်ပေးရပါ့မယ် ...
ဥပမာ => ကိုယ့်ရဲ့ drive က g ဆိုရင် g: ဆိုရေးပြီးတော့ ရိုက်လိုက်ပါ ... အဲ့လို ရိုက်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ path လမ်းကြောင်း က ပြောင်းသွားပါလိ့မ်မယ် .. သူ့ရဲ့ command line မှာ G:\_> ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ...
ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် del *.lnk ဆိုပြီးတော့ ရိုက်လိုက်ပါ ... အဲ့ဒါဆိုရင် သူ့အထဲက shortcut ဖြစ်နေတာတွေ အကုန်လုံး ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် ...
ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ attrib -s -r -h *.* /s /d /l ဆိုပြီးတော့ ထပ်ရိုက်လိုက်ပါ ...
အဲ့ဒီ့လို ရိုက်ပြီးသွားရင်တော့ ခဏစောင့်လိုက်ပါ .... ခဏနေရင် ပျောက်နေတဲ့ ဖိုင်တွေ အကုန်လုံး ပြန်မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ....
အောက်က ပုံမှာတော့ ကျွန်တော် အပေါ်မှာပြောထားတာလေးတွေ အကုန် ရိုက်ထားတာ မြင်ရပါ့မယ် ... အဲ့ဒီ့လိုလေး တဆင့်ချင်းဆီ ရိုက်သွားလိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာ ....
credit to => groldz.com
Posted on Tuesday, September 17, 2013 by Unknown
ယူနီကုဒ်၊​ မကုဒ်၊ မကုဒ်တကုဒ် ပြသနာများ ( myanmartutorials.com )
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်စိတ် သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိတော်မူတဲ့ အတိုင်း ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ Web Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာကို မထိတွေ့လို့မရပါဘူး။ ကိုယ်က စာစီစာရိုက်လောက် သုံးမယ်ဆိုရင် ဘာသုံးသုံး ဘာပြသနာမှာ မရှိပေမယ့် Web Page တွေအနေနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ပြသနာတွေ ရှိလာပါတယ်။ Web page တွေမှာ စာတွေအဖြစ် တင်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အနေနဲ့ လိုက်နာသင့်လိုက်နာအပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ အတော်များများ ရှိလာပါတယ်။ web page မှာ တင်လိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ
Search Engine စတာတွေမှာ ပြန်သုံးနိုင်ဖို့အတွက် အချက်အလက်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်
Web Archive လို့ခေါ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို နောင်တစ်ချိန်မှာ ပြန်သုံးဖို့ ပြန်ညွန်းဖို့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
Web Content တွေဆိုတာ အချက်အလက် အရင်းအမြစ်တွေ အဖြစ် သက်ဝင် လှုပ်ရှားစေပါတယ်။
အဲဒီလို အချက်တွေ ပြည့်စုံစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းကမ်းတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။
အချက်အလက်များ ချိတ်ဆက်မှု စနစ်
ဆိုပြီး သုံးပိုင်းရှိပါတယ်။ အဲဒီ သုံးပိုင်းကို ပြည့်စုံအောင် မှန်ကန်အောင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်မှသာ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို ရရှိခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက် အမည်ပေးစနစ်ဆိုတာ အချက်အလက်များကို မှန်ကန်တိကျစွာ အမည်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အမည်ပေးတဲ့ နေရာမှာလဲ ခွေးကို ခွေးလို့ အမည်ပေးရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြစ်တာနဲ့ အညီ ကွန်ပျူတာက သူသိမ်းလိုက်တဲ့ နေရာမှာ ခွေးလို့ သိမှာ မဟုတ်ပဲ စာလုံးတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ code point တွေကိုသာ မှတ်သား သိမ်းဆည်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ အချက်အလက် မှန်ကန်ဖို့အတွက် အမည်ပေးစနစ်လဲ မှန်ရမှာ ဖြစ်သလို မှတ်သား သိမ်းဆည်းတဲ့ စနစ်လဲ မှန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအဆင့် အဲဒီလို အချက်အလက် အမည်ပေးစနစ် မှန်ကန်ပြီဆိုရင် အချက်အလက် စုဖွဲ့မှု စနစ်ကိုလဲ မှန်ကန်အောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ စုဖွဲ့မှု စနစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အမည်ပေးစနစ် အပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ အမည်ပေးစနစ်မှာ မှားနေရင် စုဖွဲ့မှု စနစ်မှာလဲ မမှန်နိုင်ပါဘူး။ အင်တာနက် စနစ်ထဲကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲနေတဲ့ ကွန်ပျူတာ အနေနဲ့ စုဖွဲ့မှု စနစ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ခွေးတွေ အုပ်စုတူလို့ ခွေးတွေပဲ စုထားတာမျိုးတင်မကပဲ keyword အစုလို့ ခေါ်တဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးခြင်းစီအလို စုထားဖို့လဲ လိုပါတယ်။ Google စတဲ့ Search Engine တွေဟာ အဲဒီလို စုဖွဲ့ပြီး ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်အဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက် စုဖွဲ့မှု စနစ်ကို ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် Website တစ်ခုခြင်းစီ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တန်း မှာတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေအတွက်ပါ တာဝန်ရှိနေတဲ့ သဘောပါ။
အဲဒီလို နာမည်ပေးစနစ်၊ အချက်အလက်စုဖွဲ့မှုစနစ် စတာတွေ မှန်ကန်မှသာ အချက်အလက် ချိတ်ဆက်မှု အဆင့်ကို မှန်ကန်အောင် တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ချိတ်ဆက်ထားနိုင်မှလဲ အမှန်တကယ် အသုံးချနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကြေးအိုးလို့ ရှာလိုက်ရင် ကွန်ပျူတာက သိမှာ ကြေးအိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ စာလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ code point တွေကိုသာ သိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ယံအမြင်မှာတော့ ကြေးအိုးလို့သာ မြင်ပြီး နောက်ကွယ်မှာ မှတ်သား သိမ်းဆည်းထားတဲ့ code point တွေ မတူရင် အမည်ပေးစနစ် မှားနေတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခု ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်ကြီးမှာလဲ အပေါ်ယံအားဖြင့် ကြေးအိုးဆိုရင် ကြေးအိုးအဖြစ် မြင်နိုင်ကြပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာတော့ သိမ်းဆည်းတာတွေ မတူတဲ့ ပြသနာတွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်နဲ့ End-user
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်နဲ့ end-user ဆိုတာ တကယ်တန်းပြောရရင်တော့ အဲဒီလို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး ပူပန်နေရတာကိုက လုံးဝ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ end-user အနေနဲ့ ဘာဖောင့်သုံးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို ပုံစံပေါ်ချင်လို့ ဆိုတဲ့ အချက်အလက် အပေါ်မှာသာ ဆုံးဖြတ်စရာလိုပဲ အဲဒီအပြင် မြန်မာစာ သုံးထားတယ်ဆိုတာလောက် သိရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုပုံစံ သိမ်းဆည်းထားတယ်ဆိုတာ သိစရာ မလိုပါဘူး။ အဲဒီလို သိစရာလိုတဲ့ သူတွေက developer တွေပါ။ အဲဒီလို ပြောရင် Font Developer တွေရော၊ Web Developer တွေရော အခြား Application Developer တွေပါ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ Web Developer ဆိုတော့ အဲဒီဖက်ကိုသာ အဓိကထား focus လုပ်လိုပါတယ်။ Website ဆိုတာ ငှက်ပျောသီး အခွံနွာကျွေးတဲ့ အဆင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အခွံနွာပေးရပါတယ်။ ခွံ့ကျွေးရပါတယ်။ ဝါးလို့ရအောင် ကူပေးရပါတယ်။ နောက်ဆုံး မျိုချရင်တောင် ချောချောချူချူဖြစ်ဖို့ လည်ပင်းပွတ်ပေးရတဲ့ အဆင့်ပါ။ အဲဒီလို အနေအထားမှာ end-user ကို ဖောင့်အကြောင်း သွားပြောနေတာ ဒါလေးတောင် မသိဘူးလားလို့ အပြစ်တင်နေတာ ဟုတ်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာနဲ့ Developer
အခု ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်မှာ သိမ်ဆည်းပုံ မတူညီတဲ့ ပြသနာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်လာတစ်မျိုး ဖြစ်ချင်တိုင်းကို ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ end-user အနေနဲ့ ရွေးချယ်စရာကလဲ နည်းပါးရတဲ့ ကြားတဲ့ သူမှန်တယ် ထင်တာကို ကိုယ်လှေ ကိုယ်ထိုး ပဲခူးရောက်ရောက် လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေကြတယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက Developer ပြသနာပါ။ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်မှာ အခြား ဘာသာစကားတွေလို သိမ်းဆည်းပုံ တစ်ခုတည်း ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ အားလုံး လက်ခံပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို သိမ်းဆည်းပုံ မှန်ကန်မှသာ နောင် တစ်ချိန် အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အားလုံး လက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို လက်ခံထားရဲ့သားနဲ့ အခုထက်ထိ အဆင်မပြေသေးတာ ကျွန်တော် အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ ဦးဆောင်တီထွင်သူ ပညာရှင်များရဲ့ အတ္တကြီးမှု၊ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်မှု၊ အမျိုးသားရေး အမြင်မရှိမှု၊ တစ်စားပွဲတည်းထိုင်ပြီး မဆွေးနွေးပဲ ကွယ်ရာမှာ အထူးသဖြင့် end-user များ ရှေ့မှောက်မှာ ချပြဆွေးနွေးပြီး ငါ့ဟာ အမှန်၊ ငါနဲ့ ငါသာ နှိုင်းစရာ လုပ်မှု စတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆိုးရွားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Developer များအနေနဲ့ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့လာကြပြီး မကြာသေးခင်က လွင့်တင်လိုက်တဲ့ သမ္မတရုံး Website မှာဆိုရင် ဘာသာစကား တစ်မျိုးတည်းကို သိမ်းဆည်းပုံ မတူညီတဲ့အတွက် website နှစ်ခု လုပ်ရတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ပေးစနစ်မှာလဲ နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် အချက်အလက် မှတ်သား သိမ်းဆည်းရာမှာလဲ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်သလို Web Archive အတွက်လဲ သုံးလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၊ အချက်အလက်များ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ရေး စနစ်တွေအတွက်လဲ သုံးစားလို့ ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာ စနစ်ကို အကဲဖြတ်ရာမှာ လူသုံးများတာနဲ့လဲ အကဲဖြစ်လို့ မရသလို လှလှပပ ရှိတာတွေနဲ့လဲ အကဲဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော့် အမြင်အရ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်ကို အကဲဖြတ်ရာမှာ အောက်ပါ အချက်တွေအတိုင်း အကဲဖြတ်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
မြန်မာစာ စနစ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ဗမာစာသာမက၊ အခြားတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများနှင့်ပါ ဘာသာစကား၏ မူလ အနှစ်သာရအတိုင်း ကိုက်ညီတဲ့ အနေအထားအဖြစ်
ကွန်ပျူတာ သုံးသည့် စနစ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကွန်ပျူတာမှာ မှတ်သား သိမ်းဆည်းမယ်ဆိုရင် စနစ်ကျစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ အနေအထားအဖြစ်
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်တော့ နောက်ဆုံး သုံးမယ့်သူဟာ end-user သာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် end-user များအနေနဲ့ အခြား ဘာသာစကားတွေကို သိသလို Font ကို ရွေးတယ်ဆိုတာ ပုံစံအတွက်ဆိုတာလောက် သိတဲ့အထိ လွယ်ကူသွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထား
အခြား ပညာရှင်ရှုထောင့်ကနေ လိုအပ်တဲ့ အကဲဖြတ်ချက်တွေ ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မြင်တာကတော့ အဲဒီလောက်ပါပဲ။
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာနဲ့ သမိုင်းအကျဉ်း
ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာရဲ့ သမိုင်းအကျဉ်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ANSI Font တွေက ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။ ANSI စနစ်ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ အတွက်သာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကလဲ စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ ပေါ်ဦးစလဲဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာကိုသာ အဓိကထား သုံးနေကြတဲ့ အချိန်လဲ ဖြစ်တာနဲ့အညီ အဂီလိပ်စာကို အခြေခံပြီး သုံးစွဲကြတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် စနစ်အဖြစ် ထွက်လာတာဆိုတော့ အမေရိကန်အတွက်ပဲ ကောင်းကောင်းပါတဲ့ သဘောပါ။ အဲဒီလိုအခြေအနေမှာ မြန်မာစာကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် ANSI ရဲ့ code point တွေ အပေါ်မှာ အစားထိုးပြီး သုံးရုံမှတစ်ပါး အခြားမရှိလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။aရဲ့ နေရာမှာ သဝေထိုးကို ထားတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလို အစားထိုးတဲ့ နည်းနဲ့ မြန်မာစာဖောင့်ကို ထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး တီထွင်တာက Apple ရဲ့ Macintosh ကွန်ပျူတာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်သာဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း လူသုံးများလာတဲ့ အနေအထားကတော့ ကိုဇော်ထွဋ်တီထွင်လိုက်တဲ့ Win Font အုပ်စုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ANSI Code တွေမှာ အစားထိုးတဲ့ စနစ်နဲ့အတူ မြန်မာစာစနစ်အတွက် အပျက်အစီးတွေ ပါလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားအရ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရတဲ့ အနေအထားအရ ပါလာတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တမင်မှားပစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ – ရရစ်ဆိုတာ မြန်မာစာ စနစ်မှာ တစ်ခုတည်း ရှိပေမယ့် ရိုက်တဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေအောင် ပုံစံမျိုးစုံထားရတာ အဲဒီ ပုံစံမျိုးစုံအတွက် code point တွေ နေရာယူထားရတာတွေ ရှိလာပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အချက်အလက် မှတ်သားသိမ်းဆည်းတဲ့ နေရာမှာလဲ အရင်လာ အရင်သိမ်းစနစ်ကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ unicode ဆိုတာပေါ်လာပြီး ANSI ဆိုတဲ့ စနစ်ကို သုံးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ တကယ်တန်း Website တွေမှာ သုံးမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာလုံးက သပ်သပ် မြန်မာစာလုံးက သပ်သပ် ဖြစ်မှသာ အဆင်ပြေမယ့် အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အနေအထားအတွက် ANSI က ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ unicode မှာသာ အခြား ဘာသာစကားအတွက် code point တွေ ပါလာတဲ့အတွက် unicode ကိုသာသုံးပြီး code point တွေ ယူရမယ့် အနေအထား ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ မြစေတီ၊ ဇော်ဂျီ အစရှိတဲ့ ဖောင့်တွေ ပေါ်လာပြီး unicode ရဲ့ code point တွေကို အသုံးပြု ဖန်တီးထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြစေတီဖြစ်ဖြစ် ဇော်ဂျီဖြစ်ဖြစ် အရင် ရှိရင်းစွဲ Win-Font တွေရဲ့ အစဉ်အလာကို ဆက်ခံခဲ့ကြတဲ့အတွက် အရင်ရှိရင်းစွဲ ရရစ်လို အမှားတွေ အမွေဆက်ခံလာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကြားနေရတဲ့ ယူနီကုဒ်နဲ့ ဇော်ဂျီပြသနာဆိုတာ တကယ်တော့ အလွန်လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆပဲလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီကိုယ်တိုင် unicode အထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး unicode ရဲ့ code point တွေကို သုံးထားပါရက်နဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ် ပြသနာဆိုတာ တကယ်တော့ end-user တွေကို လှည့်စားတဲ့ လှည့်စားချက်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။ တကယ်တန်း ဖြစ်နေတာက နောက်ကွယ်မှာ မှတ်သား သိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံ မတူညီတဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ရှေ့ဆက်ပြီး ရေးသွားရင် ထင်းရှားအောင် ပြောပြပေးပါ့မယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ unicode စနစ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာ ရှိနေတဲ့ ဘာသာစကား၊ သင်္ကေတ အားလုံးအတွက် ဖြစ်တာနဲ့အညီ မြန်မာစာအတွက်လဲ နေရာတွေရဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို မြန်မာစာအတွက် နေရာရဖို့ ပထမဦးဆုံး ဆောင်ရွက်သူကတော့ မြန်မာစာဖောင့်ကို အရင်ဆုံး ကွန်ပျူတာမှာ ရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Apple ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Apple Macintosh မှာ မြန်မာစာ ရအောင် ဘယ်နိုင်ငံခြားသာ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိပေမယ့် unicode မှာ မြန်မာစာ ပါလာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးသူကတော့ Apple ဖြစ်ပါတယ်။ (မှတ်မှတ်ရရ မြန်မာစာကို OS Level မှာ ပထမဦးဆုံး တရားဝင် ထည့်သွင်းပေးသူကလဲ Apple ပဲဖြစ်ပြီး Mac OSX Lion မှာ စပါလာပါတယ်)
နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာစာ ဖြစ်တာနဲ့အညီ မြန်မာဖက်က ပညာရှင်တွေ ပါဝင်လာခဲ့ကြပြီး မှားယွင်းနေတာကို ထောက်ပြ အမှန်ပြင်ခိုင်း စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာ အခုဆိုရင် အဆင့် ဘယ်နှစ်ဆင့်လောက် ရောက်သွားပြီဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး။ အဲဒီလို code point တွေ unicode မှာ သတ်မှတ်တဲ့ အချိန်တွေဟာ အတော်လေးကို အချိန်ယူခဲ့ရပြီး သူ့ရှေ့မှာ သူသတ်မှတ်ပေးတဲ့ code point တွေ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် code point တွေ သုံးတဲ့ မြစေတီ၊ ဇော်ဂျီကဲ့သို့သော ဖောင့်တွေ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြစေတီရော ဇော်ဂျီမှာပါ ကကြီးဆိုတဲ့ စာလုံးကို U1000 ဆိုတဲ့နေရာမှာ ထားခဲ့တဲ့အတွက် unicode code point တွေကို အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိင်ပါတယ်။ အများစုကလဲ apple ရဲ့ unicode code point တောင်းဆိုမှုနောက်ပိုင်းမှာ ထွက်ပေါ်လာကြတယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။
အဲဒီလို unicode ဆိုတဲ့ စံနှုန်း အပေါ်မှာ code point တွေ သတ်မှတ်ရင်း အရေးဆိုရင်း ကျန်တဲ့သူတွေကလဲ ကိုယ့်လှေကိုယ်ထိုးရင်း အခုလို ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်တဲ့ အနေအထားကို တည့်တည့်ကြီး ဆိုက်ရောက်လာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ unicode ဆိုတဲ့ စံနှုန်းဟာ ပြင်လို့ မရတဲ့ စံနှုန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းပြချက် အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ပြင်မယ်ဆိုရင် ဗားရှင်းအသစ်ထွက်တဲ့အခါ အပြောင်းအလဲတွေ ပါလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ပြင်ကြဆင်ကြတဲ့ နေရာမှာ သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ unicode နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဖက်က တာဝန်ရှိသူတွေ အပေါ်မှာ ပြောဆိုပြစ်တင်မှုတွေကိုလဲ ကျွန်တော်ကြားရသလို အခြား ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာ လုပ်နေကြသူတွေ အပေါ်မှာလဲ ပြစ်တင် ပြောဆိုမှုတွေကို ကျွန်တော် ကြားနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကြားသမျှ အနေအထားအရ ကွယ်ရာမှာ အတင်းပြောသလို ပြောနေကြတာတွေပါ။ တစ်စားပွဲတည်းထိုင်ပြီး ပြောကြတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
Apple ရဲ့ Mac OSX Lion က စပြီး မြန်မာစာ ပါလာပါတယ်။ နောက်ပြီး Windows 8 မှာလဲ မြန်မာစာ ပါလာပြန်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပါလာတဲ့ မြန်မာစာတွေ အားလုံးဟာ အမှားအယွင်းတွေလဲ ပါလာခဲ့ပြီး သုံးလို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီထက် ရင့်ရင့်သီးသီး ပြောရရင်တော့ သုံးစားလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Apple မှာ ဖြစ်ဖြစ် Windows မှာဖြစ်ဖြစ် အခြေခံတာတော့ International Standpoint ဖြစ်တဲ့ Unicode ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သုံးစားမရတဲ့ အကြောင်းကတော့ တီထွင်ဖန်တီးတဲ့သူတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ပညာရှင်တွေ မဟုတ်လို့ပါ။ (ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသား ပညာရှင်တွေသာ ပါလို့ကတော့ ရန်ဖြစ်နေတာနဲ့ အခုလောက်အဆင့်တောင် ပါဦးမယ် မထင်ပါဘူး) ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက International Standpoint ဖြစ်တဲ့ Unicode ဆိုတာကတော့ လူတိုင်း လက်ခံထားတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြစေတီ၊ ဇော်ဂျီ၊ Official Unicode၊ ဧရာ စတာတွေ အကုန်လုံး unicode standpoint မှာ ရပ်တည်ကြတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း စံမြန်မာ ဆိုတာကတော့ unicode standpoint ကို လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားရှိလာပါတယ်။
အကြမ်းအားဖြင့် သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် မြစေတီ၊ ဇော်ဂျီ၊ Official Unicode၊ ဧရာ စတဲ့ unicode standpoint တစ်ခုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး code point ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားနေတဲ့ အုပ်စုရယ်၊ unicode standpoint ကို လက်မခံပဲ သီးသန့် standpoint တစ်ခုကို လိုချင်နေတဲ့ စံမြန်မာလို အုပ်စုရယ် စသည်ဖြင့် ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ (တစ်ခြားဟာတွေလဲ ရှိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မသိနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်) ဒီနေရာမှာ စံမြန်မာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် ပြောလိုပါတယ်။ စံမြန်မာဆိုတာကို လေ့လာကြည့်တော့ တရုတ်စာတွေလို Symbolic Character ပုံစံ ချဉ်းကပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကကြီးဆိုတာ တစ်လုံး၊ ကကြီး လုံးကြီးတင်ဆိုတာ တစ်လုံး၊ ကကြီးလုံးကြီးတင် တစ်ချောင်းငင် ဆိုတာ တစ်လုံး စသည်ဖြင့် code point တွေကို နေရာယူတဲ့ ပုံစံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသာ နေရာယူမယ်ဆိုရင် code point တွေ အများကြီး ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (တော်သေးတာက ANSI ဖက်က မြန်မာစာ စနစ်တွေ တက်မလာလို့)
ကဲ … အဲဒီလောက်ဆို ဇာတ်ရည်လည်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြားမိသလောက် ကွယ်ရာမှာ ပြောကြတဲ့ အတင်းတွေကို လူစုံတုန်း ဖောက်သည်ချရမယ်ဆိုရင်
သူက သူ့ဟာကို ခိုးထားတယ်၊ သူနဲ့သူက အစက တည့်တယ်၊ နောက်တော့ မတည့်တော့ဘူး၊ အချင်းချင်း တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကို မလေးစားဖူး၊ ပုံစံပြောင်းခိုးကြတယ်။ (ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အော်ကျယ်အော်ကျယ်တွေ အများကြီး ကြားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်လို့ အတင်းအဖျင်းတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ နောက်ပေါက်တွေတော့ သိကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး)
အခု unicode consortium နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ဖက်က တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေကြတာ၊ ဘာလုပ်လုပ် ငါတို့ သိတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ လုပ်ချင်တာ လုပ်တဲ့နောက် ငါတို့ မလိုက်နိုင်ဘူး။
အခု unicode မှာ ရှိနေတဲ့ code point တွေက အမှားတွေ အများကြီးပဲ၊ ပြင်ပါဆိုလဲ ပြင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။
unicode ဆိုတာကြီးက အသင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။
အဲဒီလို ပြောကြဆိုကြတာတွေကို ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အကုန်ပြောလို့လဲ မသင့်တော်ဘူးလို့ ထင်လို့ ချန်ထားတာပါ။ end-user နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြဆိုကြတာတော့ ဘောင်မဝင်တဲ့အတွက် ချန်ထားပါတယ်။ ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ unicode အပေါ်မျာ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်အပေါ်မှာ အတိုင်း အတာတစ်ခုအထိ ရိပ်စားမိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ် ပြသနာတို့၊ ဧရာနဲ့ ယူနီကုဒ် ပြသနာတို့၊ ဇော်ဂျီနဲ့ ဧရာ ပြသနာတို့ဆိုတာ unicode အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ code point ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု ပြသနာတွေသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် သတိထားမိတာ တစ်ခုက ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ ပညာရှင်တိုင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသိအမှတ်မပြုလိုကြပဲ အဲဒီလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသိအမှတ်ပြုလာအောင်လဲ ဘယ်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းကမှ ကမ္မကထပြုတာ မရှိပါဘူး။ အရင်က Myanmar NLP လို့ ခေါ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားပြု မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဦးဆောင်သူပိုင်းက အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ကိုယ့်တစ်ဗို့တည်း ကြည့်မှုတွေကြောင့် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ဘာမှ ဖြစ်မလာတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သွားပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလို အစိုးရဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ လက်အောက်ကနေ ပြုတ်သွားပြီး ဘယ်ရောက်မယ်တော့ မသိသေးပါဘူး။
ကျွန်တော် ဒီလောက်အထိ ရေးလာပြီဆိုတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုတွေ လုပ်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို အကြံပြုဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Standpoint တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်
ဒါကတော့ တစ်နေရာရာကို စမှတ်အဖြစ် အားလုံးသတ်မှတ်မှသာ ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာ အားလုံ အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ စမှတ်တစ်ခုကို အားလုံး လာဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီ စမှတ်က ဘာဖြစ်မလဲ အုပ်စုနှစ်ခု ကွဲနေတဲ့ အနေအထားမှာ standpoint ကို ဘယ်ဟာရွေးသင့်သလဲ၊ အဲဒီလို ရွေးတဲ့နေရာမှာလဲ မြန်မာစာ စနစ်နဲ့ ကိုက်ရဲ့လား၊ နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုရဲ့လား စသည်ဖြင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံ သုံးသပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် စမှတ်တစ်ခု ရလာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် အမြင်အရတော့ အခုအချိန်မှာ အသင့်တော်ဆုံး စမှတ်က unicode ပဲဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ မြစေတီ၊ ဇော်ဂျီ၊ Official Unicode၊ ဧရာ၊ နောက် မဂ်လာမြန်မာဖောင့်ဆိုလား အားလုံးက unicode standpoint ပေါ် ရပ်နေကြတာပါ။ အခုချိန်မှာမှ စပြီး Myanmar Unicode Code Point ကို မြေလှန်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ စံမြန်မာအနေနဲ့ unicode consortium ကို သူ့ပုံစံအတိုင်း code point တွေ တောင်းတာ မရဘူးလို့ ကြားမိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် စမှတ်တစ်ခုဟာ unicode ပဲလို့ အကျဉ်းအားဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ တစ်စားပွဲတည်း ထိုင်ပြီး ဆွေးနွေးကြပါ
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို standpoint တစ်ခုကို ရပြီဆိုရင် တစ်စားပွဲတည်းထိုင်ပြီး ဆွေးနွေးကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလဲ end-user ဆိုတဲ့ ရှုထောင့်ကို ခဏဖယ်ထားပြီး ဆွေးနွေးကြဖို့ လိုပါတယ်။ အားလုံး တူညီတဲ့ ဘုံရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို ထားပြီး ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်ဆိုတာ တစ်ခုတည်း ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ဘုံရည်မှန်းချက်မျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကွယ်ရာမှာ ပြောနေကြမယ့်အစား ဘာမှမဆိုင်တဲ့ end-user တွေကို မှိုင်းတိုက်နေမယ့်အစား တစ်စားပွဲတည်းမှာ ပညာရှင်အချင်းချင်း ဆွေးနွေးကြပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေတွေ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ မြန်မာစာစနစ် ဖြစ်တာနဲ့အညီ မြန်မာစာ ပညာရှင်ကြီးများကိုလဲ ဖိတ်ခေါ် အကြံဉာဏ်များ ယူသင့်သလို ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများကိုလဲ တက်ရောက်စေသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်စားပွဲတည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာ မြန်မာပြည် အနေအထားအရ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတမ်းတွေ၊ အထောက်အထား သက်သေတွေ ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေး ကြဖို့လိုပါတယ်။ ငါက အစကတည်းက ပါလာတာ၊ အံတိုနေပြီဆိုပြီး နောက်လူရဲ့ တင်ပြချက်၊ ထောက်ပြချက်ကို လက်မခံရင်လဲ အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သလို နောက်လူတွေကလဲ ဖြစ်သင့်တဲ့ စံနှုန်းတွေ အပေါ်မှာ မဆွေးနွေးကြရင် အထောက်အထား သက်သေမရှိရင် အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်နှင့် အသုံးချ Developer
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်နဲ့ အသုံးချ Developer များကတော့ အတော်လေးကို တိုင်ပတ်တဲ့ အနေအထားလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘီးကို အသင့်သုံးပြီး ကားကိုထွင်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘီးက ပုံစံအမျိုးမျိုး ဖြစ်နေတော့ ဘယ်ဘီးကို သုံးရမှန်းမသိဖြစ်နေရတဲ့ အနေအထားပါ။ တစ်ဖက်ကလဲ အွန်လိုင်းဖြစ်တာနဲ့အညီ အသုံးချ အချက်အလက်တွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ အသိကလဲ နှောက်ယှက်နေပါတယ်။ ဒီဘီးကိုသုံးပြီး ဒီခရီးကိုဆက်ပါမယ်ဆိုမှ မင်းဘီးက ချီးနင်းထားတယ်။ မင်းဘီးကတော့ တာယာသားမကောင်းဘူး စသည်ဖြင့် အဖက်ဖက်ကလဲ ဝေဖန်ကြပါသေးတယ်။ တော်တော်လေးကို စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာ ကောင်းတဲ့ အနေအထားလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာနေပြီး မြန်မာစာနဲ့ မကင်းနိုင်တဲ့ အသုံးချ Developer များရဲ့ ဒုက္ခကတော့ မသေးလှပါဘူး။ ကြာလေ ပိုဆိုးလေ၊ ကြာလေ ပိုဆိုးလေ ဖြစ်လာတော့ စိတ်ထဲမှာ သပိတ်မှောက်ချင်စိတ်တွေ အကုန်ပတ်ဆဲချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ အသုံးချ Developer ဆိုတာ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ ပညာရှင်များအတွက် ပေါင်းကူးများ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ အသုံးချမယ့် end-user များလက်ထဲကို ထည့်ပေးမယ့်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်လဲ တိုးတက်လာစရာ အကြောင်း မမြင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်လှပါသည် ဆိုတဲ့ အစား မြန်မာစာ ပျောက်မှာ စိုးကြောက်လှပါသည် ငါတစ်ကောကော ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် ပညာရှင်များဟုသာ ဟစ်ကာ ဟစ်ကာ အော်လိုက်ချင်ပါတော့သည်။
Credit to Myanmartutorials
Undelete Plus ( ဖိုင် ပြန်ရှာရန် )
အခု တင်ပေးတဲ့ ဟာကလည်း ဖိုင် တွေ ဖျက်မိရင် ပြန်ရှာတဲ့ ဟာလေးပါ ... Partition Guru ထက်တော့ အသုံးသိပ်ဝင်မယ် မထင်မိဘူး ... ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက Partition တွေ ကို ပြန်ရှာ မရနိုင်ဘူး ထင်တယ် ....ဒါပေမယ့် ပျက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေ ကိုတော့ ပြန်ရှာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ... သူ က ကြေငြာထားတာ ကို က ကြည့်ကြည့်လေ ... A New Life For Your Files တဲ့ .. အဲ့ဒါကြောင့် လိုတဲ့ အခါ ကိုယ့်အတွက် Back up ဖြစ်အောင် လို့တော့ ယူ ထားသင့်တယ် ထင်ပါတယ် ... ပေါ့ ပေါ့ ပါးပါး နဲ့ ရှာ ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ ... လိုချင်သူများ အနေနဲ့ အောက်မှာ ယူလို့ရပါတယ် ... Crack လည်းပါပါတယ် ....
Crack ထည့်နည်းက တော့ Rar ကို ဖြည်လိုက်ပါ ... ပြီးရင် အဲ့ဒီ့ အထဲက crack ဆိုတာလေး ကို ကူး ပြီးရင် အောက်က ဖိုင်လမ်းကြောင်းလေး အတိုင်း သွားပြီးတော့ ထည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ ....
C:\_Program Files (x86)\_eSupport.com\_eSupport UndeletePlus
Soft ကိုတော့ အောက်မှာ သွားဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ ....
Posted on Saturday, July 20, 2013 by Unknown